२०७७ भदौ २३ मंगलबार ०४:०५:००
कोरोना उपचारमा आयुर्वेदिक औषधि ‘एसटी’को क्लिनिकल ट्रायल सुरु
कोभिड– १९ को उपचारमा प्रभावकारी मानिएको औषधि रेम्डेसिभिरको ‘क्लिनिकल ट्रायल’मा अस्पतालहरूले बिरामीबाट पैसा असुल गरिरहेका छन् । सरकारले प्लाज्मा थेरापी सुरु गरेका कोभिड अस्पतालहरूमा निःशुल्क रेम्डेसिभिर प्रयोग गर्ने निर्णय गरे पनि निजी तथा सरकारी अस्पतालले बेच्ने गरेका छन् ।
अनुसन्धान परिषद्का सदस्यहरूले पनि निजी तथा सरकारी दुवै अस्पतालहरूले रेम्डेसिभिर प्रयोगमा बिरामी ठगिरहेको बताए । रेम्डेसिभिर खरिद गर्ने सप्लायर्सहरूले पनि निजी अस्पतालले चर्को मूल्यमा खरिद गरिरहेको बताए । एक सप्लायर्स भने, ‘कतिपय अस्पतालले त बजार मूल्यभन्दा बढी तिरेर किनिरहेका छन् । त्यसका लागि नेतादेखि मन्त्रीसम्मले उपलब्ध गराउन भन्ने गरेका छन् ।’
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई कहाँ कसरी औषधिको ट्रायल भएको छ केही जानकारी छैन । परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले रेम्डेसिभिरबारे औषधि व्यवस्था विभागलाई जानकारी हुने बताए । परिषद्का अनुसार अहिलेसम्म ७० जनालाई रेम्डेसिभिर औषधि दिइएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले अहिलेसम्म दुई हजार सात सय भाइल रेम्डेसिभिर नेपाल भित्रिएको बताए । यो औषधिको अवस्थाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् बेखबर छन् ।
अनुदानमा आएको मात्रै वितरण गर्ने तयारी
सरकारले अनुदानमा आएको रेम्डेसिभिर मात्रै अस्पतालहरूमा ट्रायलका रूपमा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले बंगलादेशबाट पाँच हजार भाइल रेम्डेसिभिर मगाएका छन् । तर, यो औषधि पनि एक हप्तादेखि बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा अड्किएको छ । नेपाल ल्याउने साधन नभएकाले त्यही अड्किएको डा. पोखरेलले बताए । विमानले निकै महँगो मूल्य भनेपछि मन्त्रालयले कसरी औषधि ल्याउने भन्नेमा निर्णय लिन सकेको छैन । डा. पोखरेलका अनुसार पाँच हजार भाइल रेम्डेसिभिर आएपछि अस्पतालहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
कोभिड उपचारमा आयुर्वेदिक औषधि ‘एसटी’को ट्रायल सुरु
कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि आयुर्वेदिक औषधि ‘एसटी’ परीक्षण गर्न अनुमति मिलेको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले औषधिलाई परीक्षण गर्न अनुमति दिएको हो । आयुर्वेद व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायले आधिकारिक रूपमा अनुसन्धान परिषद्बाट स्वीकृत लिएर ट्रायल थालिएको बताए । एसटी मधु अर्थात् गाउँमा पाइने जेठीमधु र त्रिकटुको सम्मिश्रणबाट औषधि बनाइएको छ ।
परिषद्का सदस्यसचिव डा. ज्ञवालीले पनि यो औषधि परीक्षणको अनुमति पाइसकेको बताए । डा. ज्ञवालीले भने, ‘कोभिडका लागि रेम्डेसिभिर र आयुर्वेदिक औषधि एसटीको क्लिनिकल ट्रायल सुरु भएको छ । हामी त्यसको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर जुन औषधिले बिरामीलाई बढी काम ग¥यो, त्यही चलाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छौँ ।’ उनका अनुसार ‘एसटी’को प्रयोग सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमितमा गरिनेछ । त्यसपछि लक्षण र अस्पताल बसाइ कति घट्यो, त्यो हेरिनेछ । साथै रगतमा केही परिवर्तन आए–नआएकोसमेत जाँच गरिने उनले बताए ।
एसटी मधु र त्रिकटु प्रयोग
विभागका महानिर्देशक डा. उपाध्यायका अनुसार एसटी मधु अर्थात् जेठीमधु र त्रिकटुको मिश्रण गरी तयार गरिएको यो आयुर्वेदिक औषधि कोरोना संक्रमितलाई दिइने गरेको छ । ‘यो औषधि चियाका रूपमा बिहान–बेलुका पकाएर खाने हो । यही औषधिबाट कैयौँ बिरामी निको भएर चाँडै डिस्चार्ज भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, अन्य देशलाई देखाउन र बुझाउन क्लिनिकल ट्रायल नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले हामीले अनुमति लिएर परीक्षण थालेका हौँ ।’
अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्मार्फत तीन प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ । कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई कति चाँडो नेगेटिभ रिपोर्ट आउँछ, लक्षण देखिएको व्यक्तिलाई गम्भीर अवस्थामा पुग्नबाट कति रोक्न सक्यो र २८ दिनसम्म नियमित औषधि खुवाएर शरीरमा एन्टिबडी बनाउँछ कि बनाउँदैन भनेर हेर्ने गरिएको छ ।
अहिलेसम्म के देखिएको छ ?
आयुर्वेद अनुसन्धान परिषद् कीर्तिपुर, प्रदेश ५ को एन्फा एकेडेमी, नवलपरासीको रजहरमा आयुर्वेद चिकित्सकको जिम्मामा संक्रमित राखिएको छ । त्यहाँ राखिएका सबैको उपचार आयुर्वेदिक पद्धति जेठीमधु र त्रिकटुको माध्यमबाट भएको छ ।
महानिर्देशक डा. उपाध्यायका अनुसार एसटी मधु र त्रिकटु प्रयोगले संक्रमित निको हुनेदर छिटो छ । ९० प्रतिशत संक्रमित सात दिनभित्र निको भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग नभएका संक्रमितको निको हुने औसत दर ११ दिन रहेको छ ।
संक्रमित व्यक्ति गम्भीर अवस्थामा पुग्ने दर ज्यादै कम देखिएको छ । हालसम्म करिब तीनजना मात्रै अस्पताल रिफर गर्नुपरेको उनले बताए । ‘धेरैजसो लक्षण भएकालाई पनि एसटी मधु र त्रिकटु मिश्रित औषधि खुवाएरै गम्भीर अवस्थामा पुग्नबाट रोकेका छौँ,’ उनले भने ।
कोरोनाबाट तीन सयको मृत्यु
पछिल्लो २४ घन्टामा देशभर ११ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने नौ सय ७९ जना नयाँ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या तीन सय पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या ४७ हजार दुई सय ३६ पुगेको छ ।
सोमबारसम्म ३० हजार ६ सय ७७ जना निको भएका छन् । संक्रमितमध्ये सात हजार एक सय ९० जना घरमै र नौ हजार ६९ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले बताए ।
#रेम्डेसिभिर # काेराेना
पार्कमै अन्तिम संस्कार हुन थाल्यो दिल्लीमा
भारतमा बिहीबार ८१,४४१ र शुक्रबार ७४,८५५ जनामा देखियो काेराेना संक्रमण
देशभर काेराेनाबाट थप नाैजनाकाे निधन